Kutannoon gammoojjii Guubaa keessaa miliyoonota onnachiisa
Waa’ee Hidhaa Guddicha Haaromsa Itoophiyaa namarraa dhaga’ee nama biraa dhageesisuu osoo hin hin taanee qaamaan achitti argamee ilaaluun fedhiin kiyya olaanaa ture. Dabareen bobba’iinsa dirree daawwannaa hidhaa kanaa wayita naga’e baay’een gammade, fedhiin koos galma ga’uun mirkaneeffadhe. Imala keenya karaa Wallaggaan taasifne keessatti lageen akka Dhidheessaafi Daabbus kanneen Abbayyaa sooran daawwachuu keenya ibsuun barbaada.
Finfinneerraa kaanee imala guyyaa 3ffaatti naannoo Beniishaangul Gumuz, aanaa Guubaa bakka hidhi haaromsaa itti ijaaramaa jiru geenye. Bakki kun olka’iinsisaa siririi galaanaa gadi ta’uusaan daran waan ho’uuf guyyaa konkolaataanis ta’e miillaan keessa socho’uuf daran rakkisaadha. Nutis ho’a hamaa kana sodaachuun Asoosaarraa hirriba miyawaa dhiisneetti sa’a 8:00tti gara Guubaatti imala eegalle. Ganama achii geenyee hanga hojjettoonni ciree nyaatanitti osoo hojii hin eegalin bakkee turre. Gaarren hidha haaroomsaa marasanii harka walqabatanii ijaajjan osoo dinqifannuu biiftuun suuta suuta akka ibidda reefuu qabatee qaama keenya ho’isuu eegalte.
Akka namootni nutti himanitti gaarreen fuulleetti ilaalaman duubaan lafti jiru Sudaan Kibbaati. Kanaafuu, Sudaan kibbaa funyaan hidha haaromsaa jala jiraachuun har’aaf osoo hin taanee boriif nu rifaasisuu hin oolle. Kunis hanga ammaatti rakkoon nageenyaa tokkollee kan hin jirre ta’us boriif garuu wabiin jiru amansiisaa ta’uu dhabuu mala. Yeroo sa’atiin afur ta’u anas ta’e namootni anaa wajjin jiran ho’a dabalaa dhufe dandamachuu hin dandeenye.
Osoo ijaarsa hidhichaa hojii gaggeessaa olaanaa hidhichaa Injinar Simanyoo Baqqalaa waliin daawwannuu sa’aatiin 7:00 ta’e. Ho’i aduu akka ibidda saafaa gubuu eegale. Hundumti keenya socho’uu dadhabne. Kaan konkolaata keessa, kaan ammoo gaaddisa mukaa jalatti lafa dhoofne.
Kana duras namootni daawwannaaf dhaqan ho’a kanaan of wallaaIanii kufan hedduun jiraachuu odeeffanne. Garuu, injinaricha dabalatee hojjettoonni hidhichaa ho’a nu gaggabse kanaaf osoo hin jilbeefatin hojiisaanii finiinsu. Kana qofa miti qaamotni nageenyaa gaaraafi sulula madheffatanii nageenya hidhichaaf waardiyyaa dhaabbataa jiru. Asiratti waanti hubatamuu qabu aarsaa bakka kanatti kaffalamaa jiru qarshiin tilmaamamuu hin danda’u.
Garuu, namootni baay’een qilleensa gaarii unachaa, nyaataafi dhugaatii gaarii soorachaa qarshiisaaniin hidhicha tumsuurraa wayita of qusatan argina. Arguun amanuudha akkuma jedhamu warra hanga lubbuutti aarsaa kaffaluuf kutannoon hojjetaa jiran osoo dhaqanii arganii qalbii jijjiirratu jedheen amana. Akkuma beekamu yeroo ammaa ijaarsi hidhaa kanaa dhaabbateera jedhamee karaa miidiyaalee hawaasaa odeeffannoon tamsa’aa jiran qabatamaan soba ta’uu ibsuun barbaada. Ogeessa ijaarsaa ta’uu baadhus wayita ammaa ijaarsi hidha kanaa gara xumuraatti waan dhufe fakkaata; haalli ijaarsasaas of eeggannoo guddaan hojjetamaa jira. Meeshaaleen ammayyaa ijaarsaaf barbaachisanis hojiirra oolanii argamu.
Haroo nam-tolcheen (sadle dam) hidha haaromsaa isa haadhorraa fageenya xiqqoorratti argama. Innis hojiinsaa gara xumuraarra waan jiru fakkaata. Haroo kana lafa daran bal’aafi mijataarraa boqochiisuuf hojiin bosona ciruu xumurameera. Bishaan akka lafa keessa gad hin seenneefis hojiin qorannoorratti hundaa’e xumurameera. Ujummoo gurguddoon laga Abbayyaarraa bishaan gara harichaatti geessanis diriirfamaniiru.
Hidhaan kun wayita xumuramee tajaajila kennuu eegalu, gulantaa guddina biyyattii daran akka ol butu shakkiin hin jiru. Kanaafuu, of qusannoo tokko malee waan qabnuun tumsuun barbaachisaadha.
Torban kana/This_Week 11164
Torban darbe/This_Month 97521
Guyyaa mara/All_Days 1435944